Ny CEO an'ny Xiaomi dia namoaka ny sarin'ny smartwatch vaovao | Androidsis
Omaly fotsiny dia nambara fa Smartwatch vaovao an'i Xiaomi miaraka amin'ny Wear OS ho tonga amin'ny herinandro ho avy eny an-tsena. Fijery iray izay tsy isalasalana fa mampanantena fa hahaliana ny mpampiasa. Ny famolavolana azy dia teboka ifanakalozan-kevitra, satria ny marika sinoa dia nahazo aingam-panahy mazava tsara tamin'ny famolavolana ny Apple Watch ho azy.
Ity dia zavatra iray izay nanjary nazava indray tamin'ny sary vaovao naseho momba an'ity Xiaomi Mi Smartwatch ity, ny anarana izay lazain'ny haino aman-jery isan-karazany fa hanana an'ity famantaranandro ity. Drafitra maoderina, ankehitriny, fa miaraka amin'izay koa dia nahazo aingam-panahy be loatra avy amin'ny isan'ireo fiambenan'i Apple.
Ny tale jeneralin'ilay orinasa no nanambara ny sary ny famantaranandro amin'ny tambajotra sosialy. Ka tena endrik'ity famantaranandro ity izay hatolotr'i Xiaomi amin'ny 5 Novambra amin'ny hetsika any Shina. Ity famantaranandro ity dia ho tonga miaraka amin'ny efijery AMOLED ihany koa satria efa fantatra araka ny filazan'ny tale jeneraliny.
Ny zavatra iray tsaho momba ity famantaranandro ity dia ny Te hanana kinova miaraka amin'ny eSIM aho. Na dia amin'izao fotoana izao aza dia tsy zavatra voamarina izany, fa mety ho filokana ho an'ny ho avy ny marika. Amin'izao fotoana izao, marika vitsivitsy no mampiasa eSIM.
Soa ihany, fohy ny fiandrasana mandra-pihaonantsika ity famantaranandro Xiaomi ity. Raha mandeha mifanaraka amin'ny drafitra ny zava-drehetra, ny fampisehoana ofisialy azy dia hatao amin'ny 5 novambra. Amin'ity hetsika ity dia azontsika atao ny mahita ny nomanin'ny marika tamin'ny famantaranandrony voalohany miaraka amin'ny Wear OS ho toy ny rafitra miasa.
Xiaomi dia a marika mivarotra tsara eo amin'ny sehatry ny akanjo, ny faharoa eto an-tany. Ity famantaranandro ity dia azo antoka fa hanampy handroaka ireo varotra ireo bebe kokoa. Noho izany dia mety hiteraka fandrahonana ho an'i Apple amin'ity sehatry ny tsena ity izy. Hifantoka amin'ny vaovao misimisy kokoa momba io finday io isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Sivanina ny sary voalohany amin'ny smartwatch Xiaomi
Sary voalohany an'ny Samsung Galaxy Home Mini, mpandahateny marani-tsaina an'i Samsung